Sida loola wadaago sawirada Dropbox ama Google Drive adoo adeegsanaya WhatsApp | Wararka IPhone
Sida loola wadaago sawirada Dropbox ama Google Drive adoo adeegsanaya WhatsApp
Cusbooneysiinta cusub ee WhatsApp ayaa timid oo ay la socoto dhammaan xanta iyo rajooyinka aan ka qabnay dhammaan wararkii laga tagay (ama aan ahayn). Si kastaba ha noqotee, inkasta oo ay yar yihiin, astaamaha cusubi waxay hagaajinayaan waayo-aragnimada isticmaale ee WhatsApp xoogaa, in kasta oo ay xaqiiqda tahay inay u muuqato in waxqabadka guud ee dalabku uu yaraaday sababo jira awgood oo aynaan ogayn. Maantana waanu ku keenay cashar ku saabsan sida loo wadaago sawirada Dropbox ama Google Drive adoo adeegsanaya WhatsApp, mid ka mid ah astaamaha cusub ee WhatsApp ay ku dartay liiskeeda isbeddelada ku saabsan cusbooneysiinta aan helnay shalay.
Taasi waa sax, dadka WhatsApp-ka ka shaqeeya waxay ka tageen xuruufta "bugfixes" gadaal si ay uga faaloodaan liiska isbeddelada ee cusboonaysiintii ugu dambaysay uguyaraan ku soo bandhigaya astaamo cusub barnaamijka farriinta degdegga ah ee adduunka ugu caansan. Waan ku barnaa sida loola wadaago sawirada Dropbox ama Google Drive adoo adeegsanaya WhatsApp:
Marka hore waxaan aadi doonnaa adeegga kaydinta daruuraha aan jecel nahay, kiiskeenna waxaan u isticmaali doonnaa Dropbox, oo aan ugu jeclahay. Sidaa darteed waxaan aadi doonnaa sawirka aan rabno inaan wadaagno oo aan furno.
Marka la furo, geeska kore ee midig waxaan ka helaynaa astaanta «share»Waxaa laga keenay macruufka 8 nidaamka qalliinka, waanu cadaadineynaa.
Marka la cadaadiyo, menu macnaha ah ayaa furi doona, waxaan fiiro gaar ah u yeelan doonnaa menu-ka hoose si aan u helno hawsha «u furan ...», taabo saxaafadda mar labaad.
Ugu dambeyntii, gudaha Ku fur ... Pop-up kale ayaa furi doona, markan waxaan dooran doonnaa WhatsApp oo ah qaabkii wax loo wadaagi lahaa. WhatsApp hubaal wuu noo furi doonaa, sidaa darteed waxaan dooranay xiriirka oo waxaan bilaabi doonnaa inaan si guud oo dhaqso leh oo isku dhafan u wadaagno.
Tani waa sida ay u fududahay in la wadaago sawirada Google Drive iyo Dropbox ee WhatsApp, waxaan rajeyneynaa in casharkaan uu kaa caawiyay, in kasta oo ay "wax fudud" u yihiin dadka isticmaala macruufka ugu badan, laga yaabee in qaarkood ay la kulmeen dhibaatooyin ama aysan ka warqabin waxa cusub. shaqo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loola wadaago sawirada Dropbox ama Google Drive adoo adeegsanaya WhatsApp
Ku jawaab constancioconsta
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 9.3 beta 5 ee loogu talagalay horumariyeyaasha iyo si guud. Qalinka Apple ayaa mar kale loo isticmaalay in lagu dhex maro
Isbarbardhig: Samsung Galaxy S7 vs iPhone 6s